Indlu kaMarcel - I-Airbnb
Malmedy, Wallonie, i-Belgium
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Jean Pierre
Eduze naseMalmedy, Stavelot, Spa, Francorchamps, the Hautes-Fagnes, .... le ndawo ibekwe endaweni efanele ukuhlola amadolobha nemvelo eseduze. Ngaphezu kwendawo yayo ekhangayo, ngithemba ukuthi uzojabulela isici sayo "ethokomele" nesinobungane .... Le ndawo yokuhlala ingase ifaneleke izithandani, izihambi ezizimele noma izihambi zebhizinisi.
Ngokuya ngokulindelekile, ngingakunikeza ulwazi ngezindawo ezihamba phambili endaweni. Abathandi bokuqwala izintaba, ukuhamba ngebhayisikili noma ukuhamba ngebhayisikili, nizoba namamephu nezeluleko emizileni ethokozisayo. Izimfundamakhwela zomlando noma okutholakele, ngingaphinde ngikunikeze izinkambo ezithakazelisayo. Kubathandi bezimoto, ukujikeleza kweFrancochamps akukude kakhulu.
ubusuku obungu-7 e- Malmedy
4.77 out of 5 stars from 318 reviews
4.77 · 318 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-318
Instituteur au village, je suis un véritable amoureux de ma région. Passionné par l'histoire particulière de celle-ci ainsi que par la nature, je serai également heureux de vous f…
Ngemva kwe-reception, ngihlala ngitholakala uma ngidingeka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Malmedy namaphethelo